Wada-hadallada Yemen Oo Ka Furmaya Kuwait
Dagaalka ka socda Yemen ayaa waxaa ku dhintay 6,000 oo qof.
Wada-hadallada maanta furmaya ayaa ah kuwii saddexaad oo ay QM aagsinto ayada oo labadii wada-hadal ee hore ay fashilmeen.
Ergo ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa la filayaa in maanta ay dalka Kuwait uga furmaan wada-hadallo ay taageereyso QM, hase yeeshee wada-hadallada ayaa la filayaa inay dib u dhacaan kadib markii eragad mucaaradka ay kasoo daaheen.
Dowladda Yemen ayaa mucaaradka Xuutiyiinta ku eedeysay inay si ula kac dib ugu dhigayaan wada-hadallada, oo looga gol lee yahay in lagu soo afjaro 18 bilood oo dalkaas ay ka socdeen dagaallo ay ku dhinteen in ka badan 6,000 oo qof.
“Waxaan diyaar u nahay hanaan siyaasadeed oo cidna aysan ka maqneyn, waxaana wax walba u huri doonaa sidii dhibka loo qaadi lahaa” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibedda Yemen Cabdal Maalik oo la hadlay wakaaladda wararka dalkaas ee Saba.
Xuutiyiinta ayaa sidoo kale muujiyey inay diyaar u yihiin dib u heshiisiin ayada oo afhayeen u hadlay, Maxamed Cabdisalaam uu warbaahinta Kuwait u sheegay inuu ku baaqayo in xukunka lagu heshiiyo si looga hadlo muran siyaasdeed kasta.
QM ayaa sanadidi tagtay qabatay laba wareeg oo wada-hadallo ah, oo midna usuan ka guuleysan.
Khasaaraha Dhulgariika Ecuador oo Korortay
Shabakadda Cusub ee Ganacsiga Internetka
Aqoonyahan Soomaali ah oo ku Kulmay Harvard
Dad Ku Dhintay Rasaas ay Fureen Ciidamada AMISOM